राती सुत्दा कपाल बाँधेर सुत्ने की खोलेर ? यस्तो छ सही तरिका – Krazy NepaL
April 16, 2021 715
कसैले यसको विपरत भन्ने गर्छन् । जसले गर्दा मानिसहरुमा कपाल बाँधेर सुत्ने वा छोडेर सुत्ने भन्नेम दुविधा हुन्छ । रातको सयमयम कपाल खोलेर हैन् कपाल बाँधेर सुत्न ठिक हुन्छ । किनकी कपाल खोलेर सुत्दा कमजोर हुने र झर्ने भएकाले बाँधेर सुत्दा नै राम्रो हुन्छ । यसबाट कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ ।
Nextअनुहारको चाउरीपनाले दिक्क हुनुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस् फिटकिरी
हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! रहेनन् प्रेमध्वज प्रधान,मदनकृष्ण श्रेष्ठले रुदैरुदै अस्पतालबाटै यशो भने ( हेर्नुस् भिडियो )
गर्भवती महिलाले यी ५ कुरा ख्याल राखे सजिलै बच्चा जन्मिन्छ , गर्नुपर्दैन् अप्रेशन